Xukuumadda Oo Kaarta Cusub Ciyaari Doonta Doorashada Guddoonka Baarlamaanka | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized Xukuumadda Oo Kaarta Cusub Ciyaari Doonta Doorashada Guddoonka Baarlamaanka
Xukuumadda Oo Kaarta Cusub Ciyaari Doonta Doorashada Guddoonka Baarlamaanka
Maaddaama dhowaan loo tartamayo doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, xukuumadda oo horey u ridday afhayeenkii hore ayaa dooneysa in ay la wareegto oo ay keento qof ku hadla ama ku shaqeeya amarrada xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Si middaas ay u rumowdo xukuumadda waxa ay wadataa dhowr musharrax, waxaana ugu muuq dheer Max’ed Mursal, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya iyo Xildhibaan shariif.
Ha yeeshee waxa cajiibka ayaa ah in xukuumadda ay diyaarisay ugu yaraan laba illaa saddex musharrax kuwaas oo loogu talagalay in midkood uu helo.
Waxyaabaha ay iska ilaallinayaan waxaa kamid ah in la dhabar jebiyo ama ugu yaraan xildhibaannada mucaaradka ay keensadaan qof aan ahayn kan ay dooneyso xukuumadda.
Kaartadan si ay u suurta gasho waxaa ku baxeysa lacago aad u badan, ha yeeshee faa’iidada ugu badan waxaa qaadan doona xukuumadda, oo haddii xitaa beri ay iska qabtaan xafiiska madaxweynaha iyaga ayaa heysta guddoonka baarlamaanka sida uu qabo Cabdi fattaax maxamuud oo kamid ah falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaalida.
Si kastaba ha ahaatee waxaa socda dadaalladii ugu dambeyay ee loogu jiro doorashada guddoonka baaralamaanka Soomaaliya kaas oo la rejeynayo in Isniinta soo aaddan ay ka dhacdo xarunta dhexe ee golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.